Fiofanana fanodinana voankazo sy legioma - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Edmondine.H il y a 2 mois
Isan’ny Faritra mpamokatra voankazo sy legioma i Matsiatra Ambony. Mitobaka ny vokatra ka amidy mora. Betsaka ny simba fotsiny noho ny tsy fisian’ny mpividy. Sakana amin’ny famoahana ny vokatra ny faharatsian’ny lalana na ny tsy fisiany mihitsy. Mahavelombolo ny fisian’ny fampiofanana toy ny nomen’ny Arenamada teto Fianarantsoa. Notanterahina izany ny 8 hatramin’ny 11 febroary, tao amin’ny “Centre d’Echange, de Documentation, d’Information Inter-Institutionnelles” (CEDII), ao Tsianolondroa sy teny amin’ny Entrepreneur Féminin de l’Océan Indien (EFOI) Antsaha, Amboaloboka. Nisy fampiharana fanamboarana ranom-boankazo (sirop) sy kaofitira ary feta na tongolo lay sy voatabia. Nampiasaina ny akora avy eto an-toerana toy ny mananasy, ny voatabia ary ny tongolo lay. Avy any an-kafa kosa ny baobab sy ny pastèque. Nomena ny mpiofana ihany koa ny fomba fanamainana voankazo sy legioma. Tsy afa-misaraka ny fananana traikefa sy ny fahaizana mitantana raha tiana handroso ny asa atao. Fomba fitantanana tsotra sy mahomby no nozaraina. Tsy latsa-danja koa ny fitandroana ny fahadiovan’ny vokatra sy ny fitaovana ampiasaina mba ho sakafo ara-pahasalamana no homena ny mpanjifa.
Ny andro fahatelo, fiofanana momba ny hetra ho fanomanana mpandraharaha ara-dalàna. Nanazava ny maha zava-dehibe ny fandoavan-ketra Ramatoa Randriamanantsoa Hasy, mpiasa ao amin’ny ivon-ketra. “Tompon’andraikitra feno amin’ny fampandehanana ny raharaham-pirenena ny olom-pirenena amin’ny fandoavana ny hetra tokony haloany”. Miantoka ny fandoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana sy ananganana fotodrafitrasa ifotony na any amin’ny foibe, ny hetra. Ilaina koa izy amin’ny fampitaovana fandiovanana ny tanàna sns… Nitondrany fanazavana manokana ny hetra tambatra (impots synthetique) ho an’ny olona manana vola maty latsaky ny roanjato tapitrisa ariary. Izay aloa eny amin’ny ivon-ketra fara-fahatarany ny 31marsa isaky ny taona itsahina. Ny dimy isan-jaton’ny vola maty no taha amerana azy. Misy ny hetra farany ambany tsy maintsy aloa araka ny sokajin’asa atao. Mila mitazona kahie na boky ho an’ny vola miditra sy mivoaka ny mpandoa hetra. Isaky ny avy mandoa hetra dia tsy maintsy mahazo karatra (carte fiscale) sy rosia (quittance) misy ny sonia sy ny anaran’ny mpandray vola. Misy hetra tambatra mitsitapitapy alaina amin’ny olona mpamatsy vokatra amin’ny olona mpandoa hetra tambatra ka arotsany eny amin’ny ivon-ketra ny vola mitovy taha (dimy isan-jato) amin’ny hetra tambatra isan-taona.
Vehivavy miasa miisa 128 avy amin’ny fikambanana maro samihafa no nanaraka ny fiofanana. Avy amin’ny Faritra Matsiatra Ambony, Ambositra, Fandriana, ary Ihosy izy ireo. Maro tamin’ny mpiofana efa misehatra amin’ny fandraharaharana no mandoa hetra. Misy ihany koa ny vao maka traikefa hozaraina amin’ny namana. Isan’ny nandray anjara tami’izao fiofanana izao, Ramatoa Talem-paritry ny Mponina, eto Matsiatra Ambony, Dr Ranja Raherivololona Philippe. “Tokony ho maro ny zavatra hay sy fantatra isan’andro. Rehefa nahazo maimaim-poana dia tokony hizara toy izany koa”, hoy izy. Ao amin’ny velirano fahavalo ny filoham-pirenena dia hoe: vehivavy sy ny zatovo vavy miatrika ny hoaviny. Ampianarina izy ireo hiezaka hizaka tena. Tsy natao vesatra ho an’ny tokantrano ny vehivavy fa mifanampy amin’ny vadiny amin’ny fampidiram-bola. Eo koa hoy izy ny velirano fahenina amin’ny fanatsarana ny asa. Mifameno ny fahaiza-manao ny tsirairay sy ny fahaiza-mitantana.
“Ho fampivoarana ny vehivavy mpikambana ao aminy no antom-pisian’ny Arenamada”, hoy ny sekretera jeneraliny, Ramatoa Natolotra Rajaonarifetra. Tsy mionona amin’ny fampiofanana ity fikambanana ity fa mikarakara hetsika toy ny foara na trano heva mba hahafahan’ny vehivavy mampiranty sy mivarotra. Manampy ihany koa ry zareo amin’ny fitadiavana lalam-barotra sy mpamatsy vola anatiny sy ivelany. Natsangana tamin’io fotoana io koa ny biraon’ny Arenamada eto an-toerana. Nofaranana tamin’ny fizarana “attestation” sy karatra fandoavan-ketra ary maha mpandraharaha izany. Raha miakatra ny fahaiza-manaon’ny vehivavy; hihena ny fahasahiranana sy ny fiankinan-doha.
Rocade d’Iarivo : Le projet de 8,2 km visant la fluidification du trafic urbain est quasi terminé - il y a 7 jours